आइसोलेसनमा अक्सिजन छैन अक्सिजन ! को दोषी ? - Birat Post
» समाचार » स्वास्थ्य अंक: 6601
आइसोलेसनमा अक्सिजन छैन अक्सिजन ! को दोषी ?
लोकेश पोख्रेल शुक्रबार, आश्विन २३, २०७७ मा प्रकाशित
विराटनगर २३ असोज ।
प्रदेशको राजधानीको जिम्मेवारी बोकेको विराटनगरमा अक्सिजन अभावमा एक व्यक्तिको मृत्यु भन्ने समाचार आउनु दुःखद छ । यो परिपुर्तिका लागि सम्बन्धित निकाय मौन जस्तै छ । अक्सिजन अभावकै कारण मृत्युवरण गर्नुपरेका घटनाहरु विराटनगरमा बढ्दै छन् ।
शुक्रबार मात्रै विचाराधीन मुद्दाको फैसला पर्खिरहेका एक कैदीबन्दी युवकको विराटनगरस्थित जिल्ला कारागार मोरंगमा कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु भएको छ ।
कोशी अस्पताल आइसोलेसनका इन्चार्ज डा. लक्ष्मीनारायण यादवका अनुसार इटहरी उपमहानगरपालिकाका २० वर्षीय युवकको शुक्रबार बिहान करिब साढे १० बजे उपचारकै क्रममा मृत्यु भएको हो । बिरामीलाई अक्सिजन दिएर उपचार गर्नुपर्ने भए पनि त्यो उपलब्ध नभएको उनले बताए । अक्सिजनका लागि आइसोलेसनबाट कोभिड १९ उपचार केन्द्रमा बिरामीलाई थप उपचारका लागि पठाउने प्रयास गरिएको भएपनि त्यहाँ बेड खाली नहुँदा समस्या भएको भनिएको छ । अक्सिजन अभावकै कारण मृत्युवरण गर्नेको संख्या बढ्दो छ । यो कुरालाई सम्बन्धित निकायले सच्याउन जरुरी भइसकेको छ ।
जेललाई सुधार गृह भनिएपनि त्यसो हुन सकिरहेको छैन । यी स्थानमा यसै पनि स्वास्थ्य समस्या छदै छ । यद्यपी अहिलेको कोरोना महामारीबाट पनि जेलहरु सुरक्षित रहन सकेका छैनन् । ती युवामा समस्या देखिएपनि उपचारमा तदारुकता नदेखिएको उनका आफन्तहरुले आरोप लगाएका छन् । युवकको स्वास्थ्यमा समस्या देखिपछि बिहीबार बिहान कोशी अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो । त्यसपछि, उनलाई कोशी अस्पतालको आइसोलेसनमा राखेर उपचार भइरहेको अवस्थामा मृत्यु भएको बताइएको छ ।
युवक लागु औषध मुद्दामा मोरंग जिल्ला अदालतको आदेशबाट विगत ८ महिनादेखि कारागारमा बन्दी जीवन बिताइरहेका थिए । जेलबाट हुने ढिलासुस्तिका कारण कतिपय मानिसहरुको अनाहकमा ज्यान जाने गरेको छ ।यस विषयमा समेत पछिल्लो समय जेलजीवन बिताइरहेकाहरुको अवस्था अध्ययन हुन सकिरहेको छैन भने मानवअधिकारको खिल्ली उडाइएको छ ।